vendredi, 27 septembre 2019 10:51
Teatra: Nodimandry « Ramaka » Tropy Landy Volafotsy
Nodimandry teo amin’ny faha-71 taonany, ny alarobia 24 septambra 2019, i Ramahazomanana Jean Louis. « Ramaka » no nahafantaran’ny maro azy teo amin’ny tontolon’ny teatra, na teto Madagasikara na tany ivelany, ary tao anatin’ny Tropy Landy Volafotsy. Mpisehatra tao amin’ny tropy Lesth Andriambelo sy Odeam Rakoto izy tany am-boalohany. (Jereo Sary Tohiny)
mercredi, 25 septembre 2019 14:56
FJKM: Manohana ny tetik'asa MAHAY
Ny sekoly FJKM dia nanatanteraka tetik'asa antsoina hoe MAHAY, ho fanabeazana ny ankizy manana fahasembanana, ilay atao hoe fanabeazana mampiaty. Ny Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara, amin'ny alalan'ny departemantan'ny sekoly FJKM,dia mandray anjara amin'ny fanatsaràna ny fampidirana an-tsekoly ny ankizy manana fahasembanana, amin'ny alalan'ny tetik'asa MAHAY, izay tohanan'ny CBM na ny Christoffel-Blinden Mission. (Jereo Sary Tohiny)
« Ordre du Mérite de Madagascar », io no mari-boninahitra natolotry ny Fanjakana an’i Ali Botralahy ho fankasitrahana azy tamin’ny nahavoahosotra an’ity tovolahy ity ho tompondaka erantany amin’ny famakiana tsianjery ny boky masina « Korany », nandritra ny fifaninanana natao tany Arabia Saodita. Ny minisitry ny Ati-tany, Razafimahefa Tianarivelo, no solontenam-panjakana nanolotra ny mari-boninahitra, teto Antsiranana ny sabotsy 21 septambra 2019, notronon’ny filohan’ny Antenimieram-pirenena Razanamahasoa Christine, sy olomanankaja maro. Mpianatry ny oniversite Antsiranana i Ali Botralahy, avy ao Soafeno. 20 taona ny tovolahy, tamin’ny taon-dasa 2018 izy no nahazo mari-pahaizana bakalôrea ary « Mention Assez-bien ».
samedi, 21 septembre 2019 19:24
Taom-baovao Malagasy: Ankalazaina eto Toamasina
22 septambra ny Taom-baovao Malagasy iraisana izay ankalazaina eto Toamasina. Tonga eto ny Lehibena andrimpanjakana, mpikambana amin’ny governemanta, solontenam-panjakana, Ampanjaka avy amin’ny lafivalon’ny Nosy, Tangalamena, olontsotra, miaramila… mankalaza izany. Misy tsangambato najoro ho marik'ity fiaraha-mankalaza ity taom-baovao Malagasy ity. Vato mirefy 7m, milanja 12 taonina nalaina tao Antananarivo izy io. Efa tafajoro ilay vato no tapaka tampoka, soa fa tsy nandratra olona. Misy ny tsimandrimandry anio 21 septambra. (Jereo Sary Tohiny)
mercredi, 18 septembre 2019 11:14
Faribolana Sandratra: Mankalaza ny faha 30 taonany
Nankalaza ny faha 30 taonany tetsy amin'ny efitrano Rado Tranom-bokimpirenena Anosy ny Faribolana Sandratra, izay teo ambany fiahian'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina, notarihin'ny ramatoa ministra Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo. Nisy ny fampirantiana ireo asa soratra maro izay nosoratan'ireo mpanoratra sy ireo mpanao tantara toa an'i Solofo José, Lydia, ry Toly sy ireo maro hafa. (Jereo Sary Tohiny)
On ne peut qu'admirer, fenomanana (Voir Suite Photo)
samedi, 14 septembre 2019 20:38
Mpikabary Katolika: Miampy 669 mianadahy
Notanterahina tao amin’ny Kianja Mitafo Mahamasina – Antananarivo, androany sabotsy 14 septambra 2019 ny lanonana famoahana tamin'ny fomba ofisialy ireo Mpikabary Katolika miisa 669 mianadahy. Mandrafitra ny andiany « François d’Assise » izy ireo. « Andrianiko ny teniko, itoriako ny Vaovao Mahafaly » no tarigetra napetraky ny fikambanan'ny Mpikabary Katolika, na ny Mpikalo.
Sary: Violah Razafy
mardi, 10 septembre 2019 16:12
Fisaorana avy amin'ny Fivondronamben'ny Eveka eto Madagasikara
lundi, 09 septembre 2019 11:42
Papa Fransoa: Mitohy atsy Maorisy ny fitsidihana Apostolika ataony
Taorian’i Mozambika sy Madagasikara dia ny nosy Maorisy no hamaranan’i Papa Fransoa ny fitsidihana Apostolika faha-31 ataony. Niainga ny maraina tetsy amin’ny seranam-piaramanidina Ivato ny fiaramanidin'ny kaompania Air Madagascar nitondra azy, ary hiverina eto Antananarivo anio hariva ihany. 1,3 tapitrisa eo ny mponina atsy Maorisy, izay manaraka ny finoana Hindoue ny 52%, Kristianina ny 30% ary Silamo ny 18%.